Kanjani ukuqhuba ICO eSwitzerland - Blockchain Izindaba
Kanjani ukuqhuba ICO eSwitzerland
Safunda kusukela Swiss umthetho niqinile Goldblum and Partners, ukukhonza abahleli ICO, indlela engcono ukubambisana zimali European futhi bahlele isibonakaliso Switzerland.
Kungani abantu abaningi baye bacabange ngani uphethe ICO eSwitzerland
Ngokwengxenye lokhu intela fashion – Ethereum Foundation, Tezos, Ukukhipha, Lykke wenza Switzerland ethandwa emphakathini mfihlo, futhi Zug uyindawo enhle kakhulu ukubhalisa inkampani ngenxa lula ukuphathwa kanye intela.
Abaphathi bedolobha amukela bitcoins njengoba ukukhokhwa kwentela njengento kufika 200 franc. Ukubhaliswa inkampani kungabuye kwenziwe ngesethulo BTC enhloko-dolobha ogunyaziwe; abezentela uyazicabangela mfihlo-zezimali njengoba impahla kanye ngokufanele osebenza intela.
Ukugada, imisebenzi umqondo, imfuneko kokuba umqondisi wendawo ngubani ndawonye elalengamele umsebenzi kule nkampani noma isikhwama, wenze Switzerland okunokwethenjelwa abatshalizimali, liqondwe abahleli ICO futhi alikukhuthazi ukusetshenziswa imikhonyovu.
Ngesikhathi besanda kuqala, sincoma ukuthi abahleli ICO funa ozakwethu abathumela ongonga semali imali. Ngaphezu kwalokho, udinga ukuqhuba Ukunakekela ngaphambi kokungenela isivumelwano imibono, ukudala Luyinkombandlela umsebenzi ukuthi lizoba yingxenye White Paper, nokuthuthukisa imigomo ukhulisa izimali ngendlela Imigomo Nemibandela, futhi uhlole ulwazi zokuqhubekisa futhi isethulo ukuhambisana.
Kukhona awokuthi ekutholeni i-zimali inqubo okubizwa ngokuthi Roadshow, okubandakanya ethumela iziphakamiso umhlangano, ubambe nezethulo, zimali ekuphenduleni’ imibuzo, ngenxa yalokho, ethola izimali. Lena iphuzu elibalulekile emsebenzini – uphendula imibuzo olukhohlisayo kakhulu, ubuso nobuso, lapho kungekho mbuzo, beqinisekisa ukungamethembi uRamaphosa siyeza.
Ngu isivumelwano abagqugquzeli, kulesigaba singahlinzeka ummeli ukushicilelwa njengoba umeluleki nephrojekthi, futhi aphendule imibuzo yezomthetho kusukela ICO amaklayenti.
Ngemva zimali ezinkulu zitholakala, sincoma kokuqala yokubhaliswa yenkampani: i Analogue LLC nge Isikhwama lomthetho 20,000 franc, CJSC – 100,000 franc. Esimeni sesibili, Bonke abanini-masheya kukhona engaziwa. Kungenzeka futhi ukuthenga inkampani ngomumo eyenziwe. Ngo okufanayo, isicelo esisemthethweni esenzelwe isidingo namalayisense ukuze umlamuli, ukuvula ama-akhawunti e amabhange nokuhlela yokwamukela izimali bezimali ezincane.
Zonke imali eyiphinda wathola lezi izigaba angaphansi intela ekupheleni kwesikhathi sokubika, futhi azikho umehluko kusuka umsebenzi iziphathimandla zentela kwamanye amazwe.
Sikhona yini isidingo sokuba ukudala isikhwama ICO eSwitzerland ?
Njengomthetho, imali izinhlangano ezuziwe ezisebenzisa iminikelo noma iminikelo kwabanye izinhlelo kungukuthi ezihlobene yokuhwebelana futhi musa bazuze lo msebenzi.
Kwaphinda lokho: isikhwama akusho yimuphi umsebenzi commercial, ethola izimali bezimali kanye sibabhadele emuva ngomvuzo.
Indaba nge TEZOS, abagqugquzeli zazo asamukelanga izincazo abameli eSwitzerland kanye nezimali amukela batjalimali ziyiminikelo, ngenhloso noma cha – is kucaciswe ekulingweni eziningana, obonisa ngokucacile isidingo ukubandakanya ummeli kuzo zonke izigaba zombili. Bheka izingcweti kungaba obhekene izincomo noma izenzo zabo.
Sethula a yakho ...
Thumela Previous:Blockchain Izindaba 31 Januwari 2018
Thumela Landelayo:Umkhiqizo ASIC chips Samsung